Ibrahimovic: “Waxaan isku arkaa sida xayawaanka oo kale.” | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Ibrahimovic: “Waxaan isku arkaa sida xayawaanka oo kale.”
Ibrahimovic: “Waxaan isku arkaa sida xayawaanka oo kale.”
Posted by: radio himilo January 7, 2017
Muqdisho – Gool-dhaliyaha hore ee naadiga Shayaadiinta Cascas lagu naaneyso ee Manchester United, Zlatan Ibrahimovic ayaa sheeganaya inuu isku arko sida xayawaan oo kale kaas oo aan u baahneyn nasasho iyo bojiino dheeraad ah sida laacibiinta kale.
35-jirka reer Sweden oo hoggaanka labaad kaga jira kala horreynta gool-dhalinta horyaalka England PL, ayaa leh 13 gool gudaha 19 ciyaarood oo uu u saftay naadigiisa.
Macalin Jose Mourinho oo la warsaday haddii uu nasiino siin karo laacibkan ayaa qirtay in, tiiyoo ay jirto inuu da’ yahay, hadana uusan ka reebi karin xulka hore ee kusoo bilaabanaya ciyaaraha kooxda.
Hadda Ibrahimovic ayaa dareensan inuusan lahayn jir caadi ah oo u heelan joogteynta ciyaarihiisa.
“Markii aad aragto jirkayga oo kale, ma ahan jir caadi ah: waa sida marka aad aragto dhogorta xayawaanka, muuqa kore waa si, waxa ka yimaadana waa micno kale. Marka waxaan isku arkaa sida xayawaanka oo kale.”
Previous: Wenger: Santi Cazorla iyo Per Mertesacker waxay galayaan heshiis cusub
Next: Juventus oo 40M Gini ku bixinaysa hanashada goolhayaha AC Milan ee Donnarumma